1 gore 6 ago #626 by degu
Nyaya yave akakiyiwa.
1 gore 6 ago #627 by Gh0stRider203
Kwete chokwadi zvauri kukumbira. Uri kukumbira Ko third-23 vane afterburner?
1 gore 6 ago #628 by rikoooo
Munoda ndauya kwamuri uye kutaura "fuza?" Nokuti chaizvo kuti shoko renyu sokunge, haufaniri dzinokukwazisai, hausi zvakanaka uye haufaniri kuita mutongo akarurama.
Time chokusika peji: 0.099 mumasekonzi